Ifulethi # HASE # kwiVilla Hasenholz
Igumbi le-45sqm elinamagumbi ama-2, ikhitshi elivulekileyo kunye negumbi lokuhlambela kwi-Villa Hasenholz, indlu yobugcisa kunye nenkcubeko kwi-Auenwald. I-villa ye-Wilhelminian style enegadi yebhiya, igadi yeziqhamo enkulu kunye nehholo yesiganeko ekupheleni kwehlathi.
I-Villa Hasenholz, indlu yobugcisa kunye nenkcubeko enegadi yebhiya kunye nendlu yeendwendwe zamagcisa kunye nabahlobo, yindawo yokuhlala yaseWilhelminian eneholo lomdaniso kunye nekholoni. Indawo engaphandle enegadi yeziqhamo enkulu kunye nendlu yegadi endala yebhiya ibekwe ngendlela encomekayo kumda wehlathi laseLeipzig. Ekuqaleni kwenkulungwane, abahambi bemini babekwazi ukuzihlaziya ngeziselo ezipholileyo kwaye babonisa ifashoni entsha ngelixa behambahamba kwizakhiwo. Indlu ibone kakhulu kwaye amaxesha okutshintsha ashiye uphawu lwabo. Emva kokumanyaniswa kunye neminyaka yesithuba, le ndlu yagrogrisa ngokuwohloka de yaphinda yafunyanwa nguMarion Salzmann ngo-2008. Eyona njongo ye-megalomaniacal ngoku ayikokugcina nje indlu ngendlela yokwexeshana kunye nokugquma ukubola, kodwa kukukhupha wonke umtsalane wexesha elidlulileyo-ngokuveza iisilingi ezipeyintwe ngesandla kunye nesituko esinemibala nesihonjiswe ngokuyinxenye ngaphezulu. isakhiwo eyintsusa Iveranda ukuya ukuvuselelwa iigadi epakini-like. Isinyathelo esikhulu, ukwakhiwa ngokutsha kwekholoni yasentshona kwafezwa ngenkxaso enkulu yokhuseleko lwesikhumbuzo seLeipzig kwi-2012 ukwenza i-Villa Hasenholz iphinde ibe nomtsalane njengendawo yokuya kwiLeipzigers. Ukongeza kwiminyhadala eyahlukeneyo yomdaniso, iikonsathi, imiboniso kunye ne-cinema, i-Villa Hasenholz ikwabamba amaqela abucala - imitshato emininzi. Kubaphulaphuli abahlukeneyo, yindawo yokuphumla, inkcubeko kunye nonxibelelwano. Wonke umntu ungenza indima yakhe ukuqinisekisa ukuba oku kuyaphumelela. Sinombulelo ngalo naluphi na uncedo, nokuba kungentsebenziswano, ngokuxhasa umbutho okanye ngokuncomela nje.
Ngama-2500 eehektare, ihlathi laseLeipzig lelinye lawona mahlathi agciniweyo amakhulu kuMbindi Yurophu kwaye ibekwe ngqo emva kocingo lwegadi yaseVilla Hasenholz. ILeipzig itshintshile kule minyaka idlulileyo kwaye isixeko siphuhla ngaphandle. Esitratweni, esasithe cwaka kwiminyaka eyi-10 eyadlulayo kwaye yayingafane isetyenziswe, iimoto ngoku ziqokelelana ngexesha lokungxama. Ngelishwa, akukho nto sinokuyenza ngaloo nto. Ngomyezo omkhulu wezilwanyana zethu (iigusha ezi-6, iihagu ezi-2 kunye ne-king poodle) kunye nehlathi le-alluvial ngqo emva kocingo, oku kunokufihlwa.
Igadi yethu yebhiya yoluntu kunye nesidlo sakusasa sivulwa ngeeCawe nangeeholide zikawonke-wonke. Igadi enkulu iyafumaneka kuwe ngexesha lokuhlala kwakho. Izinja nazo zamkelekile, kodwa kufuneka zigcinwe kwintambo ngenxa yeegusha zethu egadini. Indlu inkulu kwaye sinomsebenzi omninzi-kwaye lincinci ixesha lokujonga iindwendwe zethu. Ukuba ujonge "unxibelelwano losapho", awukho kwindawo elungileyo kunye nathi. Nabani na ofuna ukuphonononga iLeipzig ngoxolo nangokuzolileyo kwaye uzimele uya kuziva ekhululekile kakhulu apha.
Igadi yethu yebhiya yoluntu kunye nesidlo sakusasa sivulwa ngeeCawe nangeeholide zikawonke-wonke. Igadi enkulu iyafumaneka kuwe ngexesha lokuhlala kwakho. Izinja nazo zamkelekile,…